Fantaro ny typeface: fika hahafantarana izay typeface ampiasaina | Famoronana an-tserasera
Fantaro ny typografika
Alao an-tsaina izany. Mikarokaroka Internet ianao ary niditra tao amin'ny tranokala pdf, tranokala na mahita sora-baventy dokam-barotra ary raiki-pitia amin'ny typografia nampiasain'izy ireo. Saingy, maro dia maro ka tsy azo atao ny mamantatra ny typeface eo alohanao!
Aza manahy, satria taona vitsivitsy lasa izay, nisy fomba sasany hamantarana karazan-tsoratra iray nanampy anao mba hahafahanao mahita ny endritsoratra marina. Mazava ho azy, ny dingana manaraka dia ny mahita raha toa ka misy karama na maimaim-poana. Fa izany dia ho lohahevitra hafa.
1 Inona no atao hoe typeface
2 Pejy hamantarana endritsoratra
2.1 Fantaro ny typeface iray amin'ny What Font
2.2 Inona no Font
2.3 Fantaro ny endritsoratra miaraka amin'ny WhatTheFont
2.4 Matcherator amin'ny endritsoratra
2.5 Fantaro ny endritsoratra amin'ny Identifont
2.6 Fantaro ny typeface amin'ny Photoshop
Inona no atao hoe typeface
Alohan'ny hanombohanao hanome safidy anao hamantatra endritsoratra, mety aminao raha fantatrao tsara izay tianay horesahina. Ary ny typography dia tsy tena karazana endri-tsoratra ampiasaina, fa miresaka asa iray izahay hisafidianana sy hampiasana karazana litera, isa ary marika samihafa hahafahana mamorona asa fanontana (na, amin'ity tranga ity, an-tserasera fahitana).
Araka ny RAE, ny typography no "Mode or style in a text of a print." Midika izany fa tsy miorina amin'ny tononkira fotsiny izy io, fa koa amin'ny andiany iray manontolo izay ho anisan'io tetikasa io. Ohatra, amin'ny gazety iray, izay samy manjaka ny sary sy ny lahatsoratra ao aminy.
Ao anatin'ny typografika, ampahany iray tena lehibe dia ny "fandalinana" litera. Ao anatiny, ny famakafakana ny anatomikan'ny taratasy dia tanterahina, izany hoe, ny hahavony, ny peratra, miakatra, sandry, fironana ... Ireo lafiny rehetra ireo dia tena zava-dehibe ary ireo olona manao endritsoratra dia mandray azy ireo kaonty rehefa mamorona ny volavolanao manokana.
Izany no antony, amin'izao andro izao, dia be dia be ny olona mizara roa amin'ireo izay karama sy ireo afaka. Fa koa ireo izay natao hampiasa manokana, ho an'ny fampiasana ara-barotra na misy malalaka.
Pejy hamantarana endritsoratra
Ankehitriny, noho io endritsoratra be dia be io, sy ny mety amoronana endritsoratra vaovao, dia matetika ianao no mahita an'izay tianao, na te hahafantatra izay iantsoana azy, na hampiasa azy io na fotsiny satria efa tena hita io. tsara tarehy.
Ny olana dia eo amin'ny pejin-tranonkala, sora-baventy ary asa printy hafa (an-taratasy na an-tserasera) dia tsy lazain'izy ireo hoe inona no antsoina hoe typeface na ahoana no fomba ahazoanao azy. Ka, talohan'izay, ianao sisa no te hahalala hoe inona izany. Talohan'izay.
Ankehitriny dia manana fomba maro hamantarana endritsoratra isika, ka avelanay eto ambany izy ireo:
Fantaro ny typeface iray amin'ny What Font
Ity dia iray amin'ireo pejy azonao ampiasaina hanandramana hahita hoe iza ny anaran'ny typeface izay nitiavanao azy. Tsotra be ilay fomba satria ny zavatra tsy maintsy ataonao dia ny mampakatra sary ny typografia. Mazava ho azy, andramo ny tsy milanja mihoatra ny 1,8MB na holaviny izany, ary manana endrika jpg, gif na png izy. Safidy iray hafa dia ny manondro ny url misy ny sary.
Ny motera fikarohana dia ho tompon'andraikitra amin'ny filazana amintsika ny momba ny typeface ananany ary hilaza amintsika hoe aiza no ahafahantsika mahazo azy. Fa koa, mamela anao hiteny izany mba hampiseho aminao ireo maimaimpoana na ireo karama (na izy roa).
Inona no Font
Eto ianao dia manana rafitra hafa, izay mety ho mora kokoa noho ilay teo aloha aza. Indrindra fa miresaka momba ny fanitarana browser Chrome azonao apetraka ao anatin'ny segondra vitsivitsy izahay. Ary ahoana ny fiasany? Eny ary tena mora koa. Ny sisa ataonao dia apetaho amin'ny litera tianao ho fantatra ny kursor ary hiseho ny sakana iray izay hilazan'izy ireo anao ny karazana endri-tsoratra, ny anarany, ny lanjan'ilay style ...
Mila mitady azy amin'ny Internet fotsiny ianao hahazoana azy io.
Fantaro ny endritsoratra miaraka amin'ny WhatTheFont
Fitaovana iray hafa, amin'ity indray mitoraka ity an-tserasera, ary mifandraika amin'ny pejy MyFonts izay ahitanao endritsoratra litera samihafa. Amin'ity tranga ity dia mihetsika amin'ny fomba mitovy amin'ny teo aloha izy. Izany hoe mila mampakatra sary ianao mba hahitany ny karazana endritsoratra, ary avy eo hanome anao lisitr'ireo endritsoratra mety hanakaiky ilay nakarinao.
Amin'ity tranga ity, imbetsaka ianao dia mety tsy mahita ilay tena izy, fa hanome anao lisitr'ireo mitovy aminy ary hiankina amin'ny fampiasana tianao hanome azy hampiasa ny iray na ny iray hafa.
Matcherator amin'ny endritsoratra
Safidy iray hafa hamantarana typeface dia ity, izay mila sary ihany koa, manana kalitao tsara indrindra ary akaiky araka izay azo atao an'ireo litera, hahafantarana azy ireo. Ary ahoana no anaovany an'izany? Eny, mianatra ny glyphs an'ny litera. Raha tsy fantatrao, ny glyph dia endrika manana font, izany hoe ny endriny na ny fomba fisarihana ireo litera (manaraka ny antsipirihany momba izany).
Araka izany, hanome anao valiny maromaro mifandraika amin'ilay tadiavinao izy, saingy "voafetra" ireo, satria izay manana Fonts Spring, orinasa iray amidiny endritsoratra ihany no hiditra.
Fantaro ny endritsoratra amin'ny Identifont
Ny anarana milaza ny zavatra rehetra. Ny tanjony dia ny mamantatra typeface, fa, tsy toy ireo teo aloha, ny fomba itadiavany azy ireo dia mifototra amin'ny antsipirian'ny tarehin-tsoratra, fa tsy amin'ny sary mety anananao momba azy.
Raha ny marina dia ho afaka hikaroka endritsoratra mifototra amin'ny fisehoany ianao, ny anaran'ilay endri-tsoratra, na mitovy izy ireo, marika na sary, na ilay olona namorona azy ireo (ny typographer-ny). Aza gaga noho izany fa manomboka mametraka fanontaniana aminao izy hanariana valiny araka izay azo atao amin'ny zavatra tadiavinao.
Fantaro ny typeface amin'ny Photoshop
Raha tsy fantatrao, nanomboka ny taona 2015 ny programa Photoshop dia mamela anao hamantatra typeface iray, na farafaharatsiny mba hanatonana izay akaiky indrindra amin'ny iray hafa. Izy io dia amin'ny alàlan'ny fitaovana antsoina hoe "Matching font" (azonao jerena ao amin'ny menio Text).
Tsotra be ny fampiasana azy satria ny motera fankasitrahana OCR ihany no hampiasaina handinihana sary na lafika iray ary hahafahany milaza aminao izay loharano heveriny fa mifanaraka amin'ny sary. Mba hanaovana izany, dia mampiasa ny angona TypeKit izay mampitaha ny endri-tsoratra sy ny endriny hahazoana ny valiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Cheats » Fantaro ny typografika